Sidee looga ciiday deegaanka Daara Salaam ee duleedka Muqdisho (Sawirro).
Sunday September 03, 2017 - 06:36:54 in Wararka by Super Admin
Malaayiin musliim ah oo ku kala nool daafaha caalamaka ayaa u dabbal degaya Ciiddu al-adxaha Sandakan 1438 Hijriya oo ku began 2017 sanadka miilaadiga. Si taasi lamid ah musliimnta soomaaliyeed ee wadanka gudihiisa ku nool ayaa si isku mid ah u weyne
Malaayiin musliim ah oo ku kala nool daafaha caalamaka ayaa u dabbal degaya Ciiddu al-adxaha Sandakan 1438 Hijriya oo ku began 2017 sanadka miilaadiga. Si taasi lamid ah musliimnta soomaaliyeed ee wadanka gudihiisa ku nool ayaa si isku mid ah u weyneysay maalinta qiimaha kuleh agtooda.
Labadii maalmood ee u dambeeyay ayaa kumanaan dadka Muqdisho iyo hareereheeda degani u dareereen deegaanka Daaruslaam oo ah deegaan aad u bilicsan, lehna adeegyo kala duwan, sida maqaayado, goobo carruurta ku ciyaaraan iyo dhismayaal aad u bilicsan.
Waxaan la arkay waalidiin gacmaha haya caruurtooda kuwaas oo iyaga iyo ubadkooduba buuxdhaafiyeen barxadaha waaweyn ee xaafadda Darusalaam kuwaas oo shirkadda dhismaha Buruuj ay kahirgelisay Xaafadan casriga ah.
Beerta Daarusalaam oo dhowaan lagu qalabeeyay agabka kala duwan ee caruurtu ay kucayaaraan ayaa noqotay meel dad badan ay soo jiidatay.
Beerta Daarusalaam oo qeyb ka ah adeegyada uu bixiyo Deegaanka Daraasulaam ayey kumanaan caruur ihi u damaashaad tagaan maalmaha ciidda iyo fasaxyada todobaadka.
Qaar ka mida waalidiinta u suura gashay in carruurtooda waqti kula qaataan ayaa sheegay in halkani ku arkeen isbaddel weyn oo aysan horay uga fileynin, waxayna sheegeen in xaafaddan Casriga ah ee Daarusalaam ay carruurtoodu ka heleen dhammaan Agabka ay carruurtu ku ciyaaraan oo waafaqsan Europe iyo Waddamada kale ee soo arkeen.
Shirkadda Dhismaha ee Buruuj ayaa Magaalada Muqdisho ka hirgelisay dhismaha deegaanka Daarusalaam, kaas oo leh dhamaan baahiyaha aasaasiga ah ee looga baahanyahay degeen.